बिदाका दिन पनि पशुपतिको भेटी बैंकमा जम्मा गरिने – Khabar Silo
काठमाण्डाै पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दैनिक गणना गरी बैंकमा दाखिला गर्ने भएको छ ।पशुपतिमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिबहादुर पाण्डेले दैनिक भेटी गणना गरी बैंकमा दाखिला गर्ने कार्यको सुरुवात गर्नुभएको हो ।
कोषले विसं २०६६ चैत २६ गतेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दानपेटिका राखी भेटीघाटी पारदर्शी गर्न सुरु गरेको थियो । भेटघाटी पारदर्शी गर्नुअघि कोषले नियमावली नै जारी गरेर पशुपतिनाथका भट्टहरुलाई तलब दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरेदेखि कोषकै कर्मचारीले भेटी गणना गरी बैंकमा दाखिला गर्ने गरेका थिए ।
कोषकै कर्मचारीले गणना गर्दा सार्वजनिक बिदाका दिन भेटी बैंकमा दाखिला हुन सक्दैन थियो । कोषका तर्फबाट कोषाध्यक्ष डा मिलनकुमार थापा, लेखा एवं संस्कृति शाखा प्रमुख प्रेमहरि ढुङ्गाना र प्रशासकीय अधिकृत गौरीशुङ्कर पराजुली तथा बैंकका तर्फबाट बत्तीसपुतली शाखा प्रबन्धक टीना श्रेष्ठ र जनसम्पर्क अधिकृत श्रुति राणाले गणनाको अनुगमन गर्नुहुने जानकारी सो अवसरमा दिइएको थियो ।दैनिक भेटीघाटी गणना गरी बैंक दाखिला गर्ने क्रममा कोषको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मुचुल्का उठाउनेछन् ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा ‘केही पनि भएन’ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन एकतावद्ध हुन सबैलाई आह्वान गरे। उनले विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त बनाउन सरकार लागि परेको दावी गरे। बुधबार सत्तारुढ नेकपाले दसैं, तिहार, नेपाल संवत र छठलगायतका चाडपर्वको अवसर […]
चर्चित नायक सरोज खनालको लो भलाग्दो व्यापार, दैनिक हुँदोरहेछ लाखौको का रोबार – हेर्नुस् भिडियो
काठमाण्डौं । लामो समय अमेरिका बसेर फर्किएका चर्चित नायक सरोज खनाल काठमाण्डौंमा अण्डा वेच्छन् भन्दा तपाईलाई विस्वास नलाग्ला । के नायक खनालले अण्डा बेचेरै जिविकोपार्जन गर्नु परेको हो र ? तर, त्यसो नभएर आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ र आफ्नो कामको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर बुझेका खनालले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका हुन् । ललितपुरको एकान्त कुनामा आफ्नै […]